Google mechara were ndọtị ọjọọ sitere na Weblọ Ahịa Web Chrome dị oke mkpa | Gam akporosis
Google enweghi mgbe ejiri egosi mmasị pụrụ iche na ọdịnaya dị na Storelọ Ahịa Play. Naanị igosipụta nchegbu gị maka ọdịnaya dịnụ bụ isiokwu nke ụfọdụ esemokwu nke jupụtara n'akwụkwọ akụkọ mgbasa ozi kachasị. N'ụzọ dị mma, ọ dị ka oge a, Google chọrọ itinye iwu na Storelọ Ahịa Play.
O di nwute, nleghara anya egosiputara na Storelọ Ahịa Play, anyị na-achọta ya na thelọ Ahịa Web Chrome, ụlọ ahịa ndọtị nke Google, ngwa na gburugburu maka Chrome, nke abụrụla anụ ọhịa ọdịda anyanwụ, na ebe anyi nwere ike ichota otutu spam, ngwa ojoo ... Google agwula ike na enweghi ikike na Storelọ Ahịa Web Chrome.
Google ekwuwaala a gbanwee ntuziaka nke ngwa, ndọtị na gburugburu nke dị ma ọ bụ chọrọ ịbụ iji kwụsị SPAM n'ime ikpo okwu. Dị ka anyị nwere ike ịgụ na blọọgụ ya ebe ọ mara ọkwa mgbanwe ndị a:
Ikwuwanye ndọtị nke ndọtị ndọtị dọtara ndị spammers na ndị aghụghọ na-ewebata usoro aghụghọ na nke dị ala iji gbalịa iduhie ma duhie ndị ọrụ anyị n'ịwụnye ha iji nweta uru ọsọ ọsọ. Ya mere, iji nọgide na-enwe ogo nke ngwa ahịa anyị ma nyere ndị ọrụ aka ịchọta ihe ha chọrọ, anyị na-ewebata ụfọdụ mmelite na amụma spam anyị.
Mgbatị ndị nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nyocha dị mma ga-ebu ụzọ wepụ ya mgbe a na-enyo ha enyo na ha na-ebuwanye ibu. Ọzọkwa, ndị mmepe ha agaghị enwe ike ịnye ihe mkpali ọ bụla iji kpalie ndị mmepe ịhapụ nyocha dị mma na ụlọ ahịa ahụ, kpọmkwem otu ihe ahụ amachibidoro na Storelọ Ahịa Play.
Ọ ga-ewepụkwa ndọtị niile na zipu SPAM amamọkwa Ha na-anwa ịghọgbu ndị ọrụ site n'ime dị ka ọrụ ndị ọzọ iji nye ya ntụkwasị obi. Mmelite a nke atumatu nke mgbakwunye niile ga-agbaso ga-adị na August 27, oge ngwụcha maka ndị mmepe chọrọ ịga n'ihu na-enye ndọtị ha na Weblọ Ahịa Web Chrome iji melite ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google mechara were ihe ojoo Chrome Web Store mee ihe ojoo
Realme 6 Pro enweela ụbọchị ntọhapụ maka Europe